Julie's Marie Milk Flavour 190g (4 Pcs) ~ ICT.com.mm
HomeJulie's Marie Milk Flavour 190g (4 Pcs)
Julie's Marie Milk Flavour 190g (4 Pcs)
Brand: Julie’s Item: Marie Milk Flavour Contains cereals containing gluten, milk derivatives and soya derivatives. Processed inafacility that also processes sesame, peanut, tree nuts and nut products. Net Weight: 190g... [Learn more]
Item: Marie Milk Flavour
မှတ်ချက်။ ။ Julie’s Marie Milk Flavour 190g (၄) ထုပ် ပါ၀င်သည်။
Marie ဘီစကစ်ကို 1874 ခုနှစ်တုန်းက လန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့ အင်္ဂလိပ်မု့န်တိုက်တစ်ခုကနေ ဖန်တီးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘီစကစ်ကို လုံးဝန်းတဲ့ပုံစံနဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး သူ့ရဲ့အမည် “Marie” ကို မုန့်ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ ရေးထွင်းထားပါတယ်။ Marie Milk Flavour က သူ့ရဲ့ ချောကလက်အရသာ Marie Chocolate Flavor လိုပဲ ကြွပ်ဆတ်ဆတ်နဲ့ ဝါး လို့ကောင်းပြီး ချိုမြတဲ့နို့အရသာနဲ့ အရသာရှိရှိ သုံးဆောင်နိုင်မှာပါ။ အခြားကုန်ကြမ်းအနေနဲ့ ကစီဓာတ်ပါဝင်တဲ့ ကောက်ပဲသီးနှံ၊ ဥ၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းနဲ့ ပဲအခြေခံ စားသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ Julie’s Marie Milk Flavour 190g အထုပ် စုစုပေါင်း (၄) ထုပ် ပါ၀င်ပါတယ်။
The Marie was created by an English bakery in London in the late 1874. The Marie is round in shape and has its name ‘Marie’ engraved onto its top surface. Similar to its Chocolate counterpart, Marie Milk Flavour isacrunchy textured snack withagentle and pleasant note of milky goodness.
Wheat Flour, Sugar, Vegetable Oil (Palm Oil), Corn Starch, Glucose Syrup, Salt, Whey Powder, Soya Lecithin (E322), Leavening Agent: [Disodium Diphosphate (E450(i)), Sodium Bicarbonate (E500), Ammonium Bicarbonate (E503)], Permitted Flavouring – Milk Flavour.